Bhaibheri—Bhuku Rinobva Kuna Mwari | Bhaibheri Rinodzidzisei?
Bhaibheri rakasiyana nemamwe mabhuku ose munzira dzipi?
Bhaibheri ringakubatsira sei kukunda matambudziko ako?
Nei ungavimba nouprofita hwakanyorwa muBhaibheri?
1, 2. Bhaibheri chipo chinofadza zvikuru chinobva kuna Mwari munzira dzipi?
UNGAYEUKA here nguva yawakagamuchira chipo chakanaka kwazvo chaibva kushamwari inodiwa? Zvichida, izvozvo zvaisangofadza chete, asi zvainyevenutsawo mwoyo. Chokwadi, chipo chinokuudza chimwe chinhu nezvomunhu anenge achipa—kuti anokoshesa ushamwari hwenyu. Hapana mubvunzo kuti wakaratidza kuonga chipo chawakapiwa neshamwari yanyatsofunga nezvacho.
2 Bhaibheri chipo chinobva kuna Mwari, chiya chatingaonga zvechokwadi. Bhuku iri rakasiyana nemamwe ose rinobudisa pachena zvinhu zvataisazombofa takaziva. Somuenzaniso, rinotiudza nezvokusikwa kwematenga azere nenyeredzi, nyika, uye murume nomukadzi vokutanga. Bhaibheri rine chokwadi chinokosha chakavimbika chinotibatsira kukunda matambudziko oupenyu uye kuzvidya mwoyo. Rinotsanangura kuti Mwari achazadzisa sei chinangwa chake, ounza mamiriro ezvinhu ari nani panyika. Chokwadi Bhaibheri chipo chinofadza zvikuru!
3. Kupiwa kwatakaitwa Bhaibheri kunotiudzei nezvaJehovha, uye nei izvi zvichinyevenutsa mwoyo?
3 Bhaibheri chipowo chinonyevenutsa mwoyo, nokuti rinobudisa pachena chimwe chinhu pamusoro poMupi wacho, Jehovha Mwari. Kupiwa kwatakaitwa bhuku rakadaro kunoratidza kuti anoda kuti timuzive zvakanaka. Chokwadi, Bhaibheri rinogona kukubatsira kuswedera pedyo naJehovha.
4. Chii chinokufadza nezvokuparadzirwa kweBhaibheri?
4 Kana uine Bhaibheri, hausi woga unaro. Bhaibheri rakabudiswa mumitauro inopfuura 2 300, rakazara kana kuti muchikamu uye vanhu vanogara panyika vanopfuura 90 muzana vanogona kuriwana. Paavhareji, maBhaibheri anopfuura miriyoni imwe chete anoparadzirwa vhiki yoga yoga! Mabhiriyoni emaBhaibheri zvichida akazara kana kuti chikamu akabudiswa. Chokwadi, hapana rimwe bhuku rakafanana neBhaibheri.
“Shanduro yeNyika Itsva yeMagwaro Matsvene” inowanika mumitauro yakawanda
5. Bhaibheri ‘rakafuridzirwa naMwari’ sei?
5 Uyezve, Bhaibheri ‘rakafuridzirwa naMwari.’ (2 Timoti 3:16) Sei? Bhaibheri pacharo rinopindura kuti: “Vanhu vakataura zvichibva kuna Mwari sezvavaitungamirirwa nomudzimu mutsvene.” (2 Petro 1:21) Kuenzanisira: Muzvinabhizimisi angaita kuti mabharani anyore tsamba. Tsamba iyoyo inenge iine pfungwa uye mirayiridzo zvamuzvinabhizimisi. Saka, chaizvoizvo iyo itsamba yake, kwete yamabharani. Saizvozvowo, Bhaibheri rine mashoko aMwari, kwete evanhu vakarinyora. Saka, Bhaibheri rose zvechokwadi i“shoko raMwari.”—1 VaTesaronika 2:13.
RINOBVUMIRANA UYE RAKARURAMA
6, 7. Nei kubvumirana kwemashoko ari muBhaibheri kuchinyanya kukosha?
6 Bhaibheri rakanyorwa mukati menguva yemakore anopfuura 1 600. Vanyori varo vakararama panguva dzakasiyana uye vaibva mumamiriro ezvinhu oupenyu akasiyana-siyana. Vamwe vaiva varimi, vabati vehove, uye vafudzi. Vamwe vaiva vaprofita, vatongi, uye madzimambo. Ruka, munyori weEvhangeri, aiva chiremba. Pasinei nemamiriro ezvinhu akasiyana-siyana evanyori varo, Bhaibheri rinobvumirana kubvira kwokutanga kusvika kwokupedzisira. *
7 Bhuku rokutanga reBhaibheri rinotiudza matangire akaita matambudziko evanhu. Bhuku rokupedzisira rinoratidza kuti nyika yose ichava paradhiso. Mashoko ose ari muBhaibheri anotaura nezvenhoroondo yezvakaitika kare kwezviuru zvemakore uye ane chokuita nenzira yakati nokubuda pachena kwechinangwa chaMwari. Kubvumirana kweBhaibheri kunofadza, asi izvozvo ndizvo zvataizotarisira pabhuku rinobva kuna Mwari.
8. Ipa mienzaniso inoratidza kuti Bhaibheri rakarurama mune zvesayenzi.
8 Bhaibheri rakarurama mune zvesayenzi. Rinotova nemashoko akanga asati ava kuzivikanwa panguva yaro. Somuenzaniso, bhuku raRevhitiko raiva nemitemo yevaIsraeri vekare yaitaura nezvokuisa munhu airwara kwake oga uye youtsanana nepo marudzi akanga akavapoteredza akanga asina chaaiziva panyaya dzakadaro. Panguva yakwaiva nepfungwa dzisina kururama pamusoro pezvakaita nyika, Bhaibheri rakati yaiva denderedzwa, kana kuti bhora. (Isaya 40:22) Bhaibheri rakataura zvakarurama kuti nyika ‘yakaturikwa pasina chinhu.’ (Jobho 26:7) Chokwadika, Bhaibheri harisi bhuku rezvesayenzi. Asi parinotaura nezvesayenzi, iro rakarurama. Izvi handizvo here zvataizotarisira pabhuku rinobva kuna Mwari?
9. (a) Bhaibheri rinoratidza munzira dzipi kuti pane zvakaitika kare rakarurama uye rakavimbika? (b) Kutendeseka kwevanyori varo kunokuudzei nezveBhaibheri?
9 Bhaibheri rakarurama uye rakavimbikawo pane zvine chokuita nezvakaitika kare. Nhoroondo dzaro dzakananga. Hadzingotauri mazita chete, asi dzinotaurawo madzinza evanhu vacho. * Kusiyana nevanhu venyika vanonyora zvakaitika kare, avo vasingawanzotauri nezvokukundwa kwevanhu vekwavo, vanyori veBhaibheri vakanga vakatendeseka, vachitonyora kunyange zvikanganiso zvavo pachavo uye zviya zvorudzi rwavo. Somuenzaniso, mubhuku reBhaibheri raNumeri, munyori wacho Mosesi anobvuma kukanganisa kwake kwakakomba kwaakatsiurirwa zvikuru. (Numeri 20:2-12) Kutendeseka kwakadaro hakuwanzowaniki mune dzimwe nhoroondo dzezvakaitika kare asi kunowanika muBhaibheri nokuti ibhuku rinobva kuna Mwari.
BHUKU RINE UCHENJERI HUNOBATSIRA
10. Nei zvisingashamisi kuti Bhaibheri ibhuku rinobatsira?
10 Bhaibheri zvarakafuridzirwa naMwari, ri“nobatsira pakudzidzisa, pakutsiura, pakururamisa zvinhu.” (2 Timoti 3:16) Chokwadi, Bhaibheri ibhuku rinobatsira. Rinoratidza kunzwisisa kwazvo zvakaita vanhu. Hazvishamisi kuti, Muridzi waro, Jehovha Mwari, ndiye Musiki! Anonzwisisa mafungiro edu uye manzwiro edu zviri nani kupfuura zvatinoita. Uyezve, Jehovha anoziva zvatinoda kuti tive vanofara. Anozivawo nzira dzatinofanira kudzivisa.
11, 12. (a) Jesu akakurukura zvinhu zvipi muMharidzo yake yepaGomo? (b) Ndedzipi dzimwe nyaya dzinobatsira dzinokurukurwa muBhaibheri, uye nei zano raro richishanda nguva dzose?
11 Funga nezvehurukuro yaJesu inonzi Mharidzo yepaGomo, yakanyorwa muzvitsauko zvaMateu 5 kusvika ku 7. Paaidzidzisa zvine unyanzvi, Jesu akataura nezvezvinhu zvakawanda, kusanganisira nzira yokuwana nayo mufaro wechokwadi, kugadzirisa kukakavadzana, kunyengetera, uye kuona zvinhu zvokunyama zvakakodzera. Mashoko aJesu achine simba uye achiri kubatsira mazuva ano sezvaakanga akangoita paakaataura.
12 Chimwe chokwadi chinokosha chiri muBhaibheri chine chokuita noupenyu hwemhuri, mashandiro, uye ukama nevamwe. Chokwadi chinokosha chiri muBhaibheri chinoshanda kuvanhu vose, uye zano raro rinobatsira nguva dzose. Uchenjeri huri muBhaibheri hunotaurwa nenzira pfupi nemashoko aMwari aakataura achishandisa muprofita Isaya, okuti: “Ini, Jehovha, ndini Mwari wako, Iye anokudzidzisa kuti ubatsirwe.”—Isaya 48:17.
Munyori weBhaibheri Isaya akafanotaura nezvokuparara kweBhabhironi
13. Mashoko api akadzama ayo Jehovha akafuridzira muprofita Isaya kunyora pamusoro peBhabhironi?
13 Bhaibheri rine uprofita hwakawanda, huzhinji hwacho hwakatozadzika. Funga nezvomuenzaniso mumwe chete. Achishandisa muprofita Isaya, uyo akararama muzana remakore rechisere B.C.E., Jehovha akafanotaura kuti guta reBhabhironi raizoparadzwa. (Isaya 13:19; 14:22, 23) Mashoko akadzama akapiwa kuti aratidze kuti guta racho raizokundwa sei. Mauto aipinda nechisimba aizoomesa rwizi rweBhabhironi, ofora achipinda muguta asingarwi. Izvozvo handizvo chete. Uprofita hwaIsaya hwakatotaura zita ramambo aizokunda Bhabhironi—Koreshi.—Isaya 44:27–45:2.
14, 15. Mamwe mashoko akadzama ouprofita hwaIsaya pamusoro peBhabhironi akazadzika sei?
14 Makore anenge 200 gare gare—usiku hwaOctober 5/6, 539 B.C.E.—uto rakadzika misasa pedyo neBhabhironi. Mutungamiriri waro aiva ani? Mambo wePezhiya ainzi Koreshi. Saka mamiriro ezvinhu akanga ava kuita kuti uprofita hunoshamisa huzadzike. Asi uto raKoreshi raizopinda muBhabhironi nechisimba risingarwi, sezvakanga zvafanotaurwa here?
15 VaBhabhironi vakanga vachiita mutambo usiku ihwohwo uye vainzwa vakachengeteka vari seri kwemasvingo avo eguta akanga akakura kwazvo. Munguva iyi, Koreshi noungwaru akatsausa mvura yorwizi yaiyerera nomuguta racho. Munguva pfupi mvura yacho yakanga yava shoma zvokuti varume vake vaigona kuyambuka rwizi rwacho ndokusvika pamasvingo eguta. Asi uto raKoreshi raizopfuura sei masvingo eBhabhironi? Nokuda kwechimwewo chikonzero, usiku ihwohwo masuo eguta racho akangosiyiwa zvawo akavhurika!
16. (a) Isaya akafanotaurei nezvezvaizoitika kuBhabhironi pakupedzisira? (b) Uprofita hwaIsaya pamusoro pokuparara kweBhabhironi hwakazadzika sei?
16 NezveBhabhironi, zvakafanotaurwa kuti: “Harizombogarwi, uyewo harizorambi riripo kwezvizvarwa nezvizvarwa. MuArabhu haazodziki tende rake imomo, uye hapana vafudzi vachaita kuti mapoka avo arare imomo.” (Isaya 13:20) Uprofita uhwu hwakataura zvinopfuura kungoparara kweguta racho. Hwakaratidza kuti Bhabhironi raizova dongo zvechigarire. Unogona kuona uchapupu hwokuzadzika kwemashoko aya. Nzvimbo isingagarwi yeBhabhironi rekare—iri makiromita anenge 80 kumaodzanyemba kweBaghdad, muIraq—uchapupu hwokuti zvakataurwa naJehovha achishandisa Isaya zvakazadzika, zvokuti: “Ndicharitsvaira nomutsvairo wokutsakatisa.”—Isaya 14:22, 23. *
17. Kuzadzika kwouprofita hweBhaibheri kunosimbisa sei kutenda?
17 Kufunga nezvokuti Bhaibheri ibhuku rouprofita hwakavimbika hakusimbisi kutenda here? Chokwadi, kana Jehovha Mwari akazadzisa zvaakapikira munguva yakapfuura, tine chikonzero chakanaka chokuva nechivimbo chokuti achazadzisawo zvaakapikira zvine chokuita nepasi rinenge riri paradhiso. (Numeri 23:19) Zvechokwadi, tine “tariro youpenyu husingaperi iyo Mwari, asingamborevi nhema, akapikira kare kare.”—Tito 1:2. *
18. Pauro, muapostora wechiKristu anotaura mashoko api ane simba ane chokuita ne“shoko raMwari”?
18 Pane zvatakurukura muchitsauko chino, zviri pachena kuti zvechokwadi Bhaibheri ibhuku rakasiyana nemamwe ose. Asi kukosha kwaro kunopfuura pakungova rinobvumirana iro pacharo, kururama mune zvesayenzi uye zvakaitika kare, uchenjeri hunobatsira, uye uprofita hwakavimbika. Pauro, muapostora wechiKristu akanyora kuti: “Shoko raMwari ibenyu uye rine simba, rakapinza kupfuura bakatwa chero ripi zvaro rinocheka nekwose uye rinobaya kusvikira panoparadzana mweya nomudzimu, uye mapfundo nemwongo yawo, uye rinokwanisa kunzwisisa kufunga nevavariro zvomwoyo.”—VaHebheru 4:12.
19, 20. (a) Bhaibheri ringakubatsira sei kuzviongorora? (b) Ungaratidza sei kuti unoonga chipo chaMwari chakasiyana nezvimwe zvose, Bhaibheri?
19 Kuverenga “shoko” raMwari riri muBhaibheri kunogona kuchinja upenyu hwedu. Kunogona kutibatsira kuzviongorora zvatisina kumboita kare. Tingataura kuti tinoda Mwari, asi zvatinoita kune zvinodzidziswa neShoko rake rakafuridzirwa, Bhaibheri, zvicharatidza pfungwa dzedu dzechokwadi, kunyange vavariro chaidzo dzomwoyo.
20 Zvechokwadi Bhaibheri ibhuku rinobva kuna Mwari. Ibhuku rinofanira kuverengwa, kudzidzwa, uye kukosheswa. Ratidza kuonga kwaunoita chipo ichi chinobva kuna Mwari nokuramba uchitarira zviri mariri. Paunoita izvozvo, uchanzwisisa zvikuru chinangwa chaMwari nokuda kwevanhu. Kuti chinangwa ichocho chii uye kuti chichazadziswa sei zvichakurukurwa muchitsauko chinotevera.
^ ndima 6 Kunyange zvazvo vamwe vanhu vachiti zvimwe zvikamu zveBhaibheri zvinopikisa zvimwe zvikamu zvaro, kutaura kwakadaro hakusi kwechokwadi. Ona Chitsauko 7 chebhuku rinonzi Bhaibheri—iShoko raMwari Here Kana Kuti Romunhu? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
^ ndima 9 Somuenzaniso, ona nhoroondo inonyatsotsanangura dzinza raJesu yakanyorwa pana Ruka 3:23-38.
^ ndima 16 Kuti uwane mamwe mashoko ane chokuita nouprofita hweBhaibheri, ona mapeji 27-9 ebhurocha rinonzi A Book for All People, rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
^ ndima 17 Kuparara kweBhabhironi unongova muenzaniso mumwe chete wouprofita hweBhaibheri hwakazadzika. Mimwe mienzaniso inosanganisira kuparara kweTire uye Ninivhi. (Ezekieri 26:1-5; Zefaniya 2:13-15) Uyewo, uprofita hwaDhanieri hwakafanotaura umambo hwenyika hunotevedzana hwaizotonga pashure peBhabhironi. Uhwu hwaisanganisira Medhiya nePezhiya uye Girisi. (Dhanieri 8:5-7, 20-22) Ona Mashoko Okuwedzera, mapeji 199-201, nokuda kwokukurukurwa kwouprofita hwakawanda hwaMesiya hwakazadzika pana Jesu Kristu.
Bhaibheri rakafuridzirwa naMwari, saka rakarurama uye rakavimbika.—2 Timoti 3:16.
Zviri muShoko raMwari zvinobatsira muupenyu hwezuva nezuva.—Isaya 48:17.
Zvipikirwa zvaMwari zviri muBhaibheri zvichatozadzika.—Numeri 23:19.
Bhaibheri​—Bhuku Rinobva Kuna Mwari (Chikamu 2)